Dawladda Turkiga oo xirtay 11 qof oo qorsheynaayay in ay afduuban Madaxweyne Erdogan – The Voice of Northeastern Kenya
Dawladda Turkiga oo xirtay 11 qof oo qorsheynaayay in ay afduuban Madaxweyne Erdogan
Sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee ku hadasha afka dawladda Turkiga ee Anadolu ayaa waxa ay sheegtay in Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ay xireen 11 qof oo lagu tuhunsan yahay in ay qorsheynaayen in ay afduub u geystaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayib Erdogan inti lagu guda jiray afgambigi dhicisoobay kaas oo dhacay 15-kii biishi dhamaatay ee July.
11-ka askari ayaa waxa laga soo qabtay degmada Ula ee kutaala gobolka Mugla waxana ay tan daba socotay kadib hawlgalo ay ciidamada aagasi ka fuliyen kadib marki ay wakaalad warar oo ay leedahay dawladda ay aroornimadi saaka shaacisay wararka ah in ay halkaas ay ku sugnaayen 11-kan askari waxa ay labada dhinac isweydaarsadeen xabada nool nool balse ma jirto cid ku dhaawacantay hawlgalkaasi.
11-ka askari ee la qabtay ayaa waxa ay kamid ahaayen ciidamo kusoo duulay hotel u madaxweyne Erdogan deganaa ee kuyaala konfur galbeed ee magaala xebeedka Marmaris halkaas oo ku qaadanaayay fasaxiisa waxana ciidamada weerarka ku soo qaaday hoteelka ay ka koobnaayen 37 askari waxana horey loo qabtay 25 kamid ah ciidamadaasi.
Kadib afgambigi dhicisoobay ayaa waxa ay dawladda Turkiga qaaday talaabo ay ku xoojineyso waddankaas oo u afgambigaas gil gilay iyado ciidamadeeda ku sameeysay isku shandheyn waxana 1400 oo sarkaal loo diiray guryahooda.
Madaxweyne Erdogan ayaa saaka sheegay in tan iyo marki u afgambigaas dhacay in ay gacanta ku dhigeen 18,699 qof kuwaas oo 10,137 kamid ah la xiray.
Dawladda Turkiga ayaa waxa ay afgambiga dhicisoobay ku eedeysay in u ahaa fikrad u ka dambeeyay wadaadka Weyn ee Fethullah Gulen kaas oo degan waddanka Maraykanka balse wadaadkan ayaa iska fogeeyay eedeymahaasi ah in u isaga ahaa maskaxdi ka dambeysay afgambigaas.
← Arsenal oo dalab ka gudbineyso Fernandez
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo lagu wado in uu booqdo maamul goboleedka Kisii →